Tain-drendrika vilany, lovia kely Mandatsaka, Ingot bobongolo, mitsangana Mill, nanarato Lasitra - manokana Metal
About CHINE MANOKANA METAL (CSM)
China manokana Metal Group Limited (CSM), ny mpamatsy ny fitaovana vy & milina vokatra, mandany ny hanaterana avo lenta ny castings, avo-machining fametrahana mazava tsara ny vokatra, ary ho sarobidy welded fabrications mpanjifa avy manerana izao tontolo izao. Mandritra izany fotoana izany, dia hanolotra ny endrika sy ny turnkey injeniera tetikasa ihany koa ...
Tsy manome Metallurgical milina, simenitra & harena ankibon'ny milina, Copper Foil Manufacturing Facilities vahaolana manerana izao tontolo izao.
ISO9001: 2008 voamarina mpanamboatra ny avo lenta, Cost-mandaitra vokatra. Mametraka hatrany ny hatsaran'ny toerana tamin'ny voalohany, ary manara-maso tanteraka ny vokatry hatsaran'ny dingana rehetra.
Professional mpanamboatra ny tain-drendrika vilany, nanarato lovia kely, ingot bobongolo, mitsangana Mill, avo-machining fametrahana mazava tsara ny vokatra, ary welded fabrications.
Hamindra lovia kely in fandrendrehana metaly Atrikasa lovia kely Matte
Titane electrodeposition drum
Hamindra lovia kely in fandrendrehana metaly Atrikasa Casting lovia kely
Aluminum Electrolyzer Sow bobongolo, Sow Pan
Chucks miaraka na tsy misy Hydro-Varingarin'i
Mitsangana Mill ary iantrao Parts gr mitsangana bary ...
Girth fitaovana ho an'ny Rotary lafaoro fandoroana biriky, fitotoam-bary sy ny fantsona baolina ...
Track Shoe fiara kodia fiara Sprockets
Rojo makarakara milina Chain Link
Rojo makarakara milina lafiny makarakara takela
Rojo makarakara milina makarakara Plate
Mitsangana Mill ary iantrao Parts mitsangana bary Gr ...
Manana traikefa manan-karena eo amin'ny famokarana ny tain-drendrika vilany, nanarato lovia kely, ingot bobongolo, mitsangana Mill, avo-machining fametrahana mazava tsara ny vokatra, ka welded fabrications, ary maharitra raharaham-barotra tany Eoropa, Etazonia, Aostralia sy ny firenena hafa.